Oracle Ithuluzi Lokutakula. Oracle DBF Ukulungisa nokubuyisela isoftware.
DataNumen Oracle Recovery iyona best Oracle DBF ithuluzi lokulungisa nokubuyisa emhlabeni. Ingalungisa okonakele Oracle DBF amafayela wesizinda futhi ubuyise wonke amatafula nezinye izinto ezikubo ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela kuncishiswe ukulahleka kokonakala kwefayela.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,638)
Kungani DataNumen Oracle Recovery?
Izici eziyinhloko ku DataNumen Oracle Recovery v1.0
Sekela zonke izinhlobo ze- Oracle database DBF amafayela.
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha DBF amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukuthola iqoqo le- DBF amafayela.
Kuhlanganiswe ne-Windows Shell, ukuze ukwazi ukuthola ifayela le- DBF ifayela elinemenyu yokuqukethwe ku-Explorer kalula.
Amaprosesa womugqa wokusekela wemiyalo.
Ukusebenzisa DataNumen Oracle Recovery Ukubuyisela Konakele Oracle yolwazi
Lapho yakho DBF amafayela alimele noma akhohlakele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen Oracle Recovery ukuskena DBF amafayela bese uthola idatha eningi evela kubo ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yikuphi okonakele noma okonakele DBF amafayela nge DataNumen Oracle Recovery, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha i DBF amafayela.
Khetha okonakele noma okonakele DBF ifayela elizotholwa:
Ungafaka i DBF igama lefayela ngqo noma chofoza ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho DBF ifayela elizotholwa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen Oracle Recovery izogcina okutholakele DBF fayela kufayela elisha elibizwa nge-xxxx_recovered.DBF, lapho i-xxxx igama lomthombo DBF ifayela. Isibonelo, komthombo DBF ifayela USERS01.DBF, igama elizenzakalelayo lefayela elitholakele lizoba ngu-USERS01_recovered.DBF. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela elibuyisiwe ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela elibuyisiwe.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Oracle Recovery intando start ukuskena nokuthola umthombo DBF ifayela. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokutakula, uma ngabe umthombo DBF ifayela lingatholwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomlayezo kanjena:
Manje usungavula okubuyiselwe DBF ifayela ku Oracle.
DataNumen Oracle Recovery 1.0 ikhishwe ngoFebhuwari 22nd, 2019
Indawo yokuthola kabusha imininingwane egciniwe, kufaka phakathi amathuluzi wokuthola kabusha imininingwane yolwazi yeMicrosoft Access kanye DBF imininingwane.
Lungisa i-dBase eyonakele, i-FoxBase, i-FoxPro ne-Visual FoxPro DBF amafayela.
Lungisa iMicrosoft ekhohlakele SQL Server Imininingwane yolwazi ye-MDF.